BizChat: Nkwukọrịta Otu na Njikọ Aka | Martech Zone
Na mbido, ụbọchị uto nke ExactTarget (ugbu a Salesforce), otu ngwa ọrụ ụlọ ọrụ enweghị ike ịme na-enweghị Yahoo! Ozi. Ewezuga ozi ezoro ezo nke oge niile nke zitere "Akwụsịrị m" ozi sitere n'aka onye ọrụ hapụrụ laptọọpụ ha mepere ma banye, akụrụngwa anaghị akwụ ụgwọ nkwukọrịta ngwa ngwa. N'ezie, ozugbo anyị ruru ọtụtụ narị ndị ọrụ, ngwa ọrụ ghọrọ ihe agaghị ekwe omume na email ghọrọ anyị bụ isi ngwá ọrụ… mana oh olee egwu ọ bụ.
Slack ghọrọ onye ama ama afọ ole na ole gara aga, ebe ụfọdụ ụlọ ọrụ hụrụ ya n'anya… ndị ọzọ nwekwara mere mkpesa banyere etu esi ahazighi ya ọwa nkwukọrịta ọ nwere ike bụrụ oge. Kwere m, Aghọtara m nkụda mmụọ nke ọtụtụ usoro njikwa ọrụ, ọtụtụ nyiwe nkwukọrịta, na email. M nwere ụfọdụ ndị ahịa na-eji Facebook ozi, ndị ọzọ Basecamp, ndị ọzọ Brightpod… na ọtụtụ ojiji email. Na email m, enwere m ngwaọrụ pụrụ iche maka nzacha na ibute ụzọ. Ọ bụ nro!
BizChat Emebere ụlọ ọrụ iji weta nkwukọrịta ha niile na mmekorita ha n'otu ebe ahaziri ahazi.
BizChat bụ ngwa nkwukọrịta ngwa ngwa na ngwa mmekorita. Nwere ike ịme otu nkata ma kesaa ozi na igwe ojii. Ọ bụ ngwa enyi na-arụ ọrụ nke na-enye gị ohere ịkekọrịta ọkwa niile nke ụlọ ọrụ, na-emekọrịta faịlụ na ebe ọ bụla, oge ọ bụla.
BizChat nwere akwụkwọ ndekọ aha ndị ọrụ dị ike nke na-enye gị ohere ịnweta ndị ọrụ niile n'otu ntabi anya na ịbanye na ndị ọrụ niile. Nwere ike ịmepụta ma kenye ọrụ ma debe ihe ndekọ na-aga. Nwere ike ịgbanwe site na desktọọpụ gaa na ngwaọrụ mkpanaka ma debe ihe niile na mmekọrịta. E wezụga nke ahụ, ọ bụ n'efu maka ndị ọrụ 100.
BizChat awade Group Chat, Direct Izi ozi, Kpọọ, Company-dum Posts, na File Filekekọrịta niile n'otu ebe. Ikpo okwu ahụ na-eme ka nkwukọrịta otu dị mfe ma na-ejikọ ngwaọrụ na ọrụ dị na mmekọrịta azụmahịa kwa ụbọchị. Nke kachasị, BizChat na-enye ohere iji gbanwee mkparịta ụka azụmahịa gị na arụmọrụ. BizChat na-enye onyinye di egwu nke imeputa ma nye aka oru site na mkparita uka gi na ime akara ederede ichoro igha n’iru.
Tags: bizchatmmekotankwukọrịta dị n'imenjikwa ọrụihe aga-eme
VisCircle: Gaa n’ihu Ngwaahịa Ecommerce gị na Teknụzụ 3D